Rasaasa News – Diinta iyo Degaanka
on March 12, 2014 12:44 am
Jijiga, March 12, 2014 – Qormada maanta [4aad] waxay daba socota qormooyin hore oo ku saabsan diinta iyo degaanka, kuwaas oo aan ugu talo galay in aan wax kaga badalo dagaalka dadban ee lagula jiro Islaamka.
Dagaalka diinta Islaamka ee degaanka Somalidu kama qarsoona dadka, waxaana laga dheehan karaa arintaasi maamulka. Degaanka Somalida [Ogadeeniya] waxaa uu ka mid yahay meelaha dhulka Somalida lagu tixgaliyo diinta Islamka, qayb libaaxna ka qaatay fidinta iyo ilaalinta diinta islaamka. Waxaa kale oo gabalku ahaa mid ilaaliyo dhaqanka, ilaashadana dhulkiisa.
Maanta waxaa jira warkii hore war soo dhaaf, Somalida Ogadeniya, waxay u baahan yihiin in laga bad baadiyo Masiixiyada si xooga leh ugu fidaysa degaanka, inta ayna mukhuuran dhalinyaradu Masiixiyada.
Dagaalka Islaamnimada lagula jiro waxaa horseed ka ah maamulka Somalida Atobiya, oo isagu gabi ahaanba ka soo horjeeda diinta Islaamka.
Wali ma cada in maamulku ula kac u samaynayo arimaha lidka ku ah Islaamka iyo in ay dhaafinayso dhalinyaronimo “labaatan jir intuu geed ka boodo ayuu talo ka boodaa”. Dhalinyarda ka shaqaysa degaanku waxay jecel yihiin dhaqanka iyo Somalinimada wayna ku faanaan “waxaan nahay Somali waxaanan ka mid nahay dalka Atobiya”, waxaan in badan ka maqalaa maamulka, waxaa iswaydiin leh maxay ugu faani la,a yihiin in ay yihiin Islaam Somali reer Atobiya.
Tan iyo intii aan bilownay digniinaha ku saabsan dagaalka uu degaanka Somalidu kula jiro diinta Islaamka, waxaa soo baxay warbixino caalami ah oo ka markhaati kacay in si aan qarsoodi lahayn loogu fidinayo masiixiyada degaanka Somalida. Hayadaha masiixiga ah ee wada hawlan ayaa ka codsayday dalalka galbeedka in ay u soo diraan dad fidiya masiixiyada iyo lacago lagu fidiyo masiixiyada.
Waxaa xaqiiq ah in dhalinyarta maamusha degaanku ayna ku baraarugsanayn hawsha fidinta masiixiyada, laakiin ay mashquul ku yihiin arimo la xidhiidha abaabul iyo hurmarin. Waxaa kale oo jira shaki xoog leh oo ah in qaar badan oo ka mid ah maamulka ay u dhawyihiin dhinaca masiixiyada.
TV-ga kaliya ee degaanku leeyahay oo jira saddex sano wali aayada Quraan ah lagama siiday [shaydaanka lagama naarin]. Shirarka la qabto, Quraan daayo Bisinka looma qabto, si cad waxaa u muuqata in degaanka Somalidu mukhuurtay Masiixiyada.
Cadaadiska ka jira degaanku wuxuu sababay in culimada diinta Islaamku ay ka cabsadaan ka hadalka xaqa kuna ekaadaan waxa uu maamulku u faro kaliya. Culimada ugu af dheer geeska Afrika, waxay ka soo jeedaan degaanka Somalida, wayna ka carareen degaanka, laakiin runtii carar culimadu kagama baxsan karaan waajibka ka saaran ilaalinta diinta Islaamka ee ay hormuudka ka yihiin.
Ujeedada qoraaladanadu ma ah iska horkeen iyo fidna abuur, laakiin waa in ay bulshada degaanka Somalida iyo masuuliyiintuba ay shaqadooda ku daraan muujinta Islaamnimadooda iyo la socoshada arimaha diiniga ah ee ka jira degaanka.
Todobaadka dambe waxaan ku soo qaadan doonaa Jijiga iyo sida ay ugu fiday masiixiyadu